Raw Testosterone Soosaarayaasha budada Soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha - Warshadda
Testosterone Isocaproate Powder waa hormoon soo saarey inta badan baaritaannada ragga. Waa hoormoonka masuulka ka ah in la siiyo ragga sifooyinka gaarka ah ee galmada. Transdermal testosterone waxay ku takhasustay sii-deynta dabiiciga ah ee jirka ee testosterone iyada oo loo marayo booga waqti-fasax ah. Baaritaanka Iskuulada Isocaproate waxaa loo isticmaalaa si loo wanaajiyo maqnaanshaha testosterone sida hypogonadism iyo cillad jinsi ah oo leh waxyeelooyin kooban.
Fiidiyowga tijaabada ah ee loo yaqaan 'testosterone isocaproate' (15262-86-9)
Qalabka isocaproate testosterone (15262-86-9) Sharaxaad
Isocaproate, ma aha steroid anabolic laakiin farsamo oo lagu dhejin karo steroid isla sida ugu caansan Cypionate ama Enanthate esters. Sida Cypionate iyo Enanthate, Isocaproate ayaa sidoo kale lagu lifaaqi karaa hormoonka testosterone, laakiin marka laga hadlayo Isocaproate tani waxay ahaanaysaa meesha kaliya ee aan aragno waxa ku lifaaqan. Testosterone-Isocaproate, foomka hal-abuurka ah ayaa ah mid aan la garanayn; haddii aad ka ogaatid, waxay ka badnaayeen amarka takhasuska ah, waxaana jirta xaqiiqo ah inaysan u baahnayn in loo baahdo Testosterone-Isocaproate ee foomkan hal-abuurka ah. Halka aan ka heleyno aaladda Isocaproat inta badan iyo halka ay ka shaqeyso faa'iido weyn waxay ku jirtaa isku darka testosterone; gaar ahaan Omnadren iyo Sustanon-250. Omnadren iyo Sustanon-250 waa labada xarriijimo ee loo yaqaan 'testosterone both' iyo 'four esters attached'; afar nooc oo kala duwan oo qiyaasta cabbiraha ah oo ka kooban hal saami guud ee testosterone. Dhammaan ujeedooyinka aadka u daran, labadan xero ayaa ah kuwo isku mid ah; wadarta guud ee qurxinta waxay ku dhawaad ​​isku mid yihiin farqiga hal-abuurka, iyo sidaasi oo kale faa'iidooyinkaas ayaa la heli karaa. Halabuurka mid kasta waa sidan soo socota:
- Qalitaanka tijaabada-Xoojinta 30mg
- Qalitaanka tijaabada-Phenylpropionate 60mg
- Baaritaan-tijaabo ah-Isocaproate 60mg
- Qalitaan tijaabo ah-Decanoate 100mg
Xashiishka Iskudhafka ah ee tijaabada ah (15262-86-9) Smamnuucista
Product Name Kalluunta isocaproate testosterone testosterone
Magaca Kiimikada Iskudambaris iskudhafid;
Isku-xirka tijaabada ee testosterone; UNII-X8ST05GYDM; CHEBI: 35001; X8ST05GYDM
Molecular Wsideed 386.576 g / mol
Miisaanka Nooca 386.6
kaydinta -20 ° C
Stability ≥ sano 2
Waa maxay budada isocaproate ee loo yaqaan "testawone testosterone" (15262-86-9)?
Nooca steroid iyo anerogisto ah ee testosterone; wuxuu leeyahay nolol badhkeed oo ka badan tijaabinta unugod
Kiniinada isocaproate ee testosterone waa qaabka tixraaca falanqaynta ee loo yaqaan 'stab anabolic androgenic' kaas oo lagu ogaan karo dhiigga. Waa dhererka dabiiciga ah ee istrogen, testosterone leh nolol badh ka dheer. Noocyada ay ku jiraan testosterone isocaproate ayaa loo tijaabiyey isticmaalka isticmaalka hypogonadism iyo dib u dhac ku yimid dhalashada bilowga. Cudurka anabolic, oo ay ku jiraan budada isocaproate testosterone, ayaa loo isticmaalay in lagu xoojiyo waxqabadka jirka ee jimicsiyada iyo cayaaraha. Waxyaabahaas waxaa loogu talagalay cilmi baarista iyo codsiyada raadinta.
Sidee budada isocaproate loo yaqaan 'testosterone' (15262-86-9) shuqullada
Iskodreerid tijaabo ah ayaa lagu xiraa dufanka asaasiga ah ama dhererka taasoo keenta dib u dhac ku yimaadda sii-deynta jirka. Waxay heshay nolol firfircoon oo macnaheedu yahay inay jidhka ku sii jiri doonto wakhti dheer oo sidaas darted si ay u hesho qaabka duritaanka hal mar ama ugu yaraan laba jeer toddobaadkii oo ku filan.
Kiniinada isocaproate testosterone waxay la mid tahay Testosteron Caproate. Waxay leedahay tiro isku mid ah oo ah hydrogens, carbons, oxygen iyo miisaan isku mid ah, laakiin noloshooda firfircooni waa hal maalin marka la barbardhigo Testosteron Caproate.
Qalabka isocaproate ee loo yaqaan 'testosterone testosterone' (15262-86-9)
Baarista Isosaproate Powder Testosterone ayaa lagu qaadi karaa qaabka cirbadeynta.
Kuwa bilowga ah qiyaasta waxaa lagu talinayaa in ay noqoto XMUMX mg / toddobaad kaas oo la qaadan karo mar ama laba jeer toddobaadkii.
Qalabka dhismaha ee xirfadleyda qiyaasta ayaa loo kordhin karaa mgmaanka 1000 asbuucii.
Xashiishka Iskudhafka ah ee tijaabada ah (15262-86-9) faa'iidooyinka
Faa'iidooyinka ka soo baxa maadooyinka loo yaqaan "Testosterone Isocaproate" sida "Omnadren" iyo "Sustanon-250" ayaa loo kala qaadi karaa laba qaybood oo guud; faa'iidooyinka laga helo sifooyinka sare ee kor ku xusan iyo nooca noocan ah ee kooxdu bixiso marka la barbardhigo hal foom oo dherer ah. Sida hore looga dooday, faa'iidada isku-darka testosterone waa in ay bixiso labada adduunka ugu fiican ee dareen yar oo waaweyn, taasina waxay bixisaa labadaba testosterone dhakhso leh oo leh saameyn joogto ah oo ku yimaada dareenka guud ee guud. Taasi waxay u muuqan kartaa mid si fudud loo fududeyn karo, lakiin dhab ahaantii wax badan maahan. Dabadeed waxaan leenahay faa'iidooyinka dhabta ah ee ku saleysan sifooyinka kor ku xusan, iyo sida Omnadren iyo Sustanon-250 ku dhowaad si xoog leh loo isticmaalo waxqabadka waxaanu kaliya diiradda saareynaa faa'iidooyinka nalalkaas.
Xilliga cayaaraha xilliga fasaxa ah, shakhsiga oo raadinaya inuu ku daro xaddi badan oo cufan iyo xoog leh, qaababka Isocaproate waa xulasho habboon iyaga oo si weyn kor ugu qaadi doona labada dhinacba. Dheeraad ah, adigoo sii kordhaya cimilada dheef-shiid kiimikaadka, hadda waxaad awoodi kartaa in aad hesho tiro badan oo cufan leh oo leh raasumaal dufan-yar, taasina waa mid qiimo leh. Dabcan, xeryahooda la mid ah ayaa loo isticmaali karaa si loo yareeyo; Dhammaanba, shiid kiimikaad kor u kaca ayaa macnaheedu yahay awoodda duxda badan ee gubta, iyo sida testosterone waa mid adag oo caan ah oo loo yaqaan 'preserver' waa mid fudud oo aad u fiican oo ah qorshe kasta oo la jarayo.
Haddii taasi aysan ku filneyn, iyadoon loo eegin ujeedadaada inaad isticmaasho kuwan xeryahooda isocaproat oo ku saleysan testosterone waxay kor u qaadi doontaa dulqaadka muruqyada; waxay kordhin doonaan heerka guud ee soo kabashada iyo xitaa ku siinaya tamar badan. Adigu ma daalin doonto sida ugu dhakhsaha badan, waad bogsan doontaa, jidhkuna wuu dayactirayaa si deg deg ah oo waxtar leh, iyo haddii aysan taasi kor u qaadin wax horumar ah. Siyaabo badan, steroid testosterone waa mid ka mid ah midka ugu fudud ee la fahmi karo, mid ka mid ah kuwa ugu fudud ee dhan, laakiin inta laga yaabo inay sahlan tahay waa ka baxsan qiimo iyo laga yaabo in ay ugu badan ee steroid antholic anderogenic of all time. Intaa waxaa dheer, marka ay timaaddo nin weyn oo caafimaad qaba, sidoo kale waa mid ka mid ah kuwa ugu raaxaysiga badan, mana jirto wax qiimo badan oo ka badan.
Soo iibso budada isocaproate testosterone laga bilaabo Buyaas.com
Qalabka tijaabada ah ee loo yaqaan 'Test Testone Acetate' (1045-69-8)